'राजनीतिक परिवर्तनमा संख्याले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन'
scheduleबिहिवार आषाढ़ ७ गते, २०७५
‘राजनीतिक परिवर्तनमा संख्याले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन’
तेजेन्द्र थापा, संयोजक- नयाँ शक्ति पार्टी, गुल्मी
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? राजनीतिमा किन लाग्नुभयो ?
म झण्डै २८ वर्ष पहिला चन्द्रकोट नपा-३ मा एक मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएँ । विभिन्न कठिनाईले प्रवेशिका परीक्षापछि मेरो अध्ययन रोकियो । स्कूले जीवनदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा झुकाव थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको प्रभाव गुल्मीमा ०५४ तिरैबाट देखिन थाल्यो । केही समय सोही पार्टीमा आवद्ध भएर काम गरेँ । त्यहाँ काम गर्दा मैले माओवादीका पनि कमजोरी देखेँ । त्यसको विरोध गर्दा म माओवादीकै एक वर्षे नजरबन्दमा परेँ । ०५५ देखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म माओवादीकै आलोचनात्मक समर्थन गरेँ । त्यसपछि स्वतन्त्र हिसाबले राजनीतिक विकल्पको खोजी गर्न थालेँ । नयाँ शक्ति निर्माण अभियान सुरु भएसँगै सोही पार्टी र अभियानमा आवद्ध भएको छु । पेशा व्यावसायको रुपमा सानो पसल र एउटा कृषि फर्म सञ्चालन गरेको छु । त्यहीँ बाख्रापालन र कागती खेती सुरु गरेको छु ।
सत्तासिन दलहरु छन् । ठूला पार्टीहरु छन् । वैकल्पिक राजनीतिक बाटो रोज्ने जाँगर कसरी चल्यो ?
मैले माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहँदा त्यतिबेला अरु नै सत्तामा थिए, शक्तिमा थिए । अहिले हामीले नयाँ शक्ति भनेर वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा पहिले कमजोर रहेको माओवादी लगायतका शक्तिहरु सत्ता र शक्तिमा छन् । राजनीतिक अभियन्ताले आज हेरेर भन्दा भोलि हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । यसै पनि नेता भनेको अग्रचेतना पनि हो । हामीले नेपाली समाजको बदलिँदो पदचापलाई सही ढंगले ठम्याएका छौं । राजमार्ग खन्ने बाटोको सुरुवात गोरेटोबाटै हुन्छ । २१औं शताब्दीमा मानव जातिलाई आवश्यक पर्ने विचार प्रतिपादन गर्ने अभियानमा नयाँ शक्ति छ । यसर्थ, म यो अभियानमा जोडिएको हुँ ।
नयाँ शक्ति आफैं पनि उतारचढावबाट ग्रुज्रिरहेको छ । दुई वर्षको राजनीतिक यात्राको कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
नयाँ पार्टी गठन र यसको विकास उतारचढावमै हुन्छ । राजनीति र सामाजिक रुपान्तरणको अभियान कुनै गणितिय सुत्रमा सपाट ढंगले अगाडी बढ्दैन । उतारचढावबाट सिकिने सिकाई अर्थपूर्ण हुन्छन् । स्थापनाकालमा एउटा लहर थियो । त्यो लहर ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेका तर रुपान्तरणप्रति कति पनि इच्छाशक्ति नभएकाहरुको भिड थियो । बाबुरामको पछाडि लाग्दा छिट्टै माथि पुगिन्छ भन्नेहरुले नयाँ शक्तिलाई पद र प्रतिष्ठामा पुग्ने छोटो बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न खोजे । हामी अहिले मात्रात्मक विकासबाट गुणात्मक विकासको मोडमा छौं । बिस्तारै नयाँ स्तरको मात्रात्मक विकासमा पनि फड्को मार्छौं ।
आफ्नो पार्टीको राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ । केही कमजोरीहरु होलान् जसले गर्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले छाडेर गए ?
अवश्य पनि नीति र कार्यदिशा सही भए पनि कार्यक्रमिक अस्पष्टताहरु रहे । राजनीतिकमा कदम मिलाउने कुराको अत्यधिक महत्व हुन्छ । हामी यहाँ चुकेकै हौं । असल नियतले मात्रै नेपालजस्तो सामाजिक चेतनास्तर बोकेको समाजमा राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकिन्न । स्थापना हुनासाथ तीनवटा चुनावहरुको लगातार सामना गर्नुपर्‍यो । पुराना पार्टीहरुले अस्तित्व रक्षाको लागि एकताको अस्त्र प्रयोग गरे र केही समयकोलागि जनतालाई भ्रमित बनाइरहेका छन् । लुम्बिनी बैठकपछि नीति र कार्यदिशामा थप प्रष्टतासँगै कार्यनीतिक श्रृंखलाहरु पनि सही ढंगले मिलाउँदै अगाडि बढ्दैछौं ।
कम्युनिष्ट ब्रान्डका दुई पार्टीहरु मिलेर ठूलो पार्टी बनेको छ । अब साना दलहरुको भविष्य संकटमा परेको हो ?
नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दुई पार्टीहरु मिलेर नयाँ पार्टी बनाएको भनेका छन् । वस्तुतः यो सुधारिएको पञ्चायत भनेजस्तै सुधारिएको नयाँ एमाले बनेको हो । यो अभियानमा आमूल परिवर्तनको लेगेसी बोकेका प्रचण्डले अनिश्चित भविष्यको जुवामा इतिहास सबै दाउमा लगाइदिएका छन् । रुप पक्षबाट हेर्दा उस्तै उस्तै पार्टीहरु मिल्नुलाई सकरात्मक नै लिन सकिन्छ । तर, यो एकतामा रुपान्तरणको पक्ष असाध्यै छायाँमा परेको त्यही पार्टीका नेताहरुले पनि स्वीकारिरहेका छन् । रुपान्तरणबिनाका नकरात्मक पक्षहरुको गठजोड अथवा एकताले समाजलाई अगाडि लैजान सक्दैन । सामाजिक रुपान्तरण र राजनीतिक परिवर्तनमा संख्याले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्दैन । नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम भने आसेपासे पुँजीवादीमा आधारित यो पार्टीमा क्रोनी क्याडर, एनजिओकर्मी, ठेकेदार, शिक्षा र स्वास्थका व्यापारी, भूमाफिया, तस्कर, सिन्डिकेटका पक्षपातीहरु र डनतन्त्रको गहिरो साँठगाँठ छ । नीति, विचार, आचरण, कार्यशैली उही पुरानै भयो भने नेपाल र नेपाली जनताको जीवनमा यो एकताले खासै अर्थ राख्दैन । अहिले स्पष्ट बहुमतका साथ कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ । यसका सामु हजारौं काम गर्ने अवसरहरु छन् । काम कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ । काम गर्ने सोच राम्रो भएता पनि काममा आई पर्ने अबरोधहरुलाई कसरी हटाउँछ हेर्न बाँकी छ । दिउँसोको संकेत बिहानीले गर्छ भने जस्तो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायात ब्यबस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सक्रियतामा यातायात क्षेत्र सुधार तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्यका लागि जुन काम हुँदै थियो तिनै महानिर्देशक भट्टराईलाई भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले सरुवा गरी दिए । यसरी इमान्दारीपूर्वक काम गरी रहेका कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाएका छन् । त्यो बिषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी लिएका छन् र के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । २०६८ सालमा तत्कालीन वैदेशिक रोजगार सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेका महानिर्देशक पुर्णचन्द्र भट्टराईलाई तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीले सरुवा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्री गिरीलाई बर्खास्त गरेका थिए । इतिहासकै शक्तिशाली ओली सरकारले त्यति हिम्मत गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो समय क्रमले देखिने छ ।
अब रह्यो कुरा यो एकताले साना दलहरु संकटमा पर्ने वा मजबुत हुने भन्ने कुरा, परम्परागत विचारमा अडेका साना दलहरु संकटमा पर्न सक्छन् । यो स्वभाविक पनि छ । तर, विकल्पको खोजी गरिरहेका लाखौं जनताको भावनाको नेतृत्व गर्न सके नयाँ शक्तिको लागि झन् मैदान खाली भएको छ । बाटो खुलेको छ ।
ठूला-ठूला पार्टीहरु मिले । विचार र कार्यक्रम मिल्ने साना पार्टीहरु मिल्नुपर्दैन ?
नयाँ शक्तिले हिजोदेखि नै उठाउँदै आएका मुद्दाहरू आज सबै पार्टीले उठाउन थालेका छन । सबै पार्टीहरुले नयाँ शक्तिले उठाएका मुद्दाका शब्द त चोरेका छन् तर ती मुद्दाको हल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका कुनै दलसँग पनि छैन । नेपाली समाजको प्रमुख अन्तरविरोध के हो ? त्यसको पहिचान र त्यसको समाधान नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन ।
यही वैचारिक र युगीन आवश्यकताको आधारमा जन्मिएका पार्टीहरुले फरक फरक पसल खोलेर बस्न आवश्यक छैन । विचार र उद्देश्य मिल्ने पार्टीहरु मिलेर तेस्रो र सशक्त समाजवादी धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
स्थानीय स्तरबाट राजनीति गर्दा केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वको गल्ती देखिन्छन् होला । केही सुझाव छन् ?
नयाँ शक्ति पार्टी आम जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप अघि नबढ्नुमा नेतृत्वको पनि केही कमि कमजोरी भएको मैले ठानेको छु । सहि मान्छेको पहिचान गर्न नसक्नु र सहि मान्छेलाई सहि जिम्मेवारी दिन नसक्नु, गलत मान्छेलाई आवश्यकता भन्दा बढी विश्वास गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु । साथै बिरोधीहरुका कुरामा पनि तुरुन्त विश्वास गरिहाल्नु । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाबको समयमा धेरै कुरा नबुझी हतारमा बाम गठबन्धनमा सामेल हुनु र तुरुन्तै बाहिरिनु यी नेतृत्वका कमजोरीहरु हुन भन्ने लाग्छ । अब नेतृत्वले यस्ता कमजोरीबाट पाठ सिकेर अरु गल्ती नदोहोर्‍याउन नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दछु ।
तत्कालीन विश्वमा विद्यमान दुई वैचारिक धारहरु उदारवादी पुँजीवादी धार र राज्य नियन्त्रित कम्युनिष्ट धार (साम्यवाद) यी दुबै धार असफल भैरहेको वर्तमान अबस्थामा तेस्रो धार लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी धार नै अबको आवश्यकता हो । हाल विश्वमा देखिएका यावत समस्याहरुको समाधान गर्न यो धार आवश्यक छ । नेपाल र नेपाली समाजमा रहेका यावत समस्याहरु र अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्न लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी धार नै चाहिन्छ । त्यो धारको नेतृत्व नयाँ शक्ति पार्टीले गरेको हुनाले लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, अभियान र व्यक्तिहरुलाई व्यापक ध्रुवीकरणमार्फत् विशाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण गरी सहभागितामुलक लोकतन्त्र हुँदै समुन्नत समाजवादमा जाने अभियानमा सहभागी हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
‘सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रियो भने उनीहरुको व्यापार घाटामा जान्छ’
अब मजदुरहरुको न्यूनत्तम तलब कम्तिमा १५ हजार पुर्‍याउनैपर्छ : प्रमुख लम्साल
अन्तर्वार्ता, अर्थ / व्यापार, समाचार
‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास कापीमा लेखेर वा भाषण गरेर हुँदैन’
‘एकता चिनीमा पानीको घुलनजस्तै गुट र समूहको अन्त्य गर्नेगरी हुनुपर्छ’
‘जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि सिण्डिकेट र दादागिरी रोक्छौं’
‘समृद्धिपछि शिक्षामा लगानी कि शिक्षामा लगानीका कारण समृद्धि भन्नेबारे हाम्रोमा द्विविधा छ’
पर्यटनमा पुरानो पुस्ता फेजआउट हुँदै र नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा
भारत र चीनबीच नेपाल च्यापिएजस्तै हामी च्यापियौं
नयाँ शक्ति र विवेकशील साझालाई केही समय टकराउन दिनुपर्छ
‘एकताबारे प्रारम्भिक कुरा अहिले र बाँकी ठूला सैद्धान्तिक कुराहरु महाधिवेशनबाट टुंगिन्छ’
हामी युवा पुराना नेताको प्रतिस्पर्धी होइन, विकल्प हौं
अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार
‘लोकतन्त्रमा कहिँकसैको गढ हुँदैन, सार्वभौम मतदाता हुन्छन्’
‘स्टार मोडेल’ हाम्रो मुख्य एजेन्डा
गठबन्धनको मुख्य नेतृत्वमा रुपान्तरणभन्दा पनि चुनावी दाउपेच हावी छ
असोज १७ को समझदारी गल्ती होइन तर, हतारमा गरियो : डा. भट्टराई
बाबुरामजीको गोर्खाबाट चुनाव लड्ने प्रवल इच्छा स्वभाविक हो : ज्ञवाली
नेपालको सन्दर्भमा वाम भनेको कम्युनिष्ट होइन : देवकोटा
अन्तर्वार्ता, प्रदेश १
‘मेरो एजेन्डा लागू गर्न सके समग्र उपमहानगर एउटा उचाईमा पुग्छ’
‘शैक्षिक गुणस्तरहिनता र माफियाकरण रोक्नु नै विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ कार्यभार हो’
‘स्वतन्त्रताको प्रयोग नभए अखिल क्रान्तिकारीको भविष्य समाप्त हुन्छ’
‘नेताले मन पराएकै भरमा अब कोही वाइसिएलको अध्यक्ष बन्दैन’
होटलभित्र महिला र पुरुषको हत्या कि आत्महत्या ?
सांकेतिक तस्बिर भक्तपुर, ६ असार । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ९ स्थित बाँसघारीमा रहेको एक होटलको कोठाभित्र महिला र...
अमेरिकामा १८ नेपाली पक्राउ, कारागारमा दुर्व्यवहार हुन सक्ने
६ असार । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गरेपछि कम्तीमा १८ नेपालीसहित करिब ८० जना दक्षिण एसियालीहरूलाई पक्राउ...
विश्वकपमा आज हुँदैछन् यी विशेष तीन खेल ?
काठमाडौँ, ७ असार । रुसमा जारी २१ औ संस्करणको विश्वकपमा आज तीन खेल हुँदैछन् । विश्वकपमा आज समूह सी को दुई खेल हुँदैछ भने समूह...
म शेर्पा समुदायको मानिस । मैले सानैदेखि मनमा सगरमाथा चढ्ने सपना हुर्कांउँदै आएँ । पछि २०१४ मा सगरमाथामा भएको एउटा हिमपहिरोमा...
काठमाडौं, ६ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७५ साल वैशाखमा सञ्चालित मानविकी तथा...
मेसीलाई फेरि अर्को अवसर
काठमाडौँ, ७ असार । आईसल्यान्डविरुद्ध पेनाल्टीलाई गोल गर्न नसकेको पीडा, त्यसमाथि बराबरीको नतिजा । विश्वकप समुह डी को खेलमा...
प्रेमीले युवती अपहरण गरेपछि..
काठमाडौं, ७ असार । वीरगन्ज महानगरपालिका–७ कुम्हाल टोलकी २३ वर्षीया युवती नेहा कर्ण अपहरणमा परेको ११ दिन बितिसक्दा पनि...
उपत्यकामा बजार अनुगमन, सात व्यापारी नियन्त्रणमा, ठूला सपिङमलहरुमा पनि अनुगमन गरिन्छः मन्त्री यादव
काठमाडौं, ६ असार । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलवाड गर्ने व्यापारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उद्योग वाणिज्य...